Antihistamines ho an'ny herisetra
Ny alèjy dia olana mahazatra amin'ny maro. Na dia tsy mijaly amin'ny fanehoan-kevitra mampihetsi-po aza ny olona iray, dia tokony tsy maintsy farafaharatsiny iray amphosia, fara fahakeliny, mampihoron-koditra na maloka be dia be. Indraindray ny antihistamines sy ny zava-mahadomelina dia ny hany tokana ahafahana mahazo ny tsy fahampiana.
Ary satria ny fanehoan-kevitra ara-pihetsehampo dia tsy vitan'ny hoe maharitra sy mitranga, fa koa manana fahafahana hiseho tampoka, ny kitapo voalohany dia tokony hanana antihistamines manerantany izay afaka manome fanampiana voalohany ho an'ilay niharam-boina. Tsy mitovy ny antihistamines sy ny fomba hanampiana amin'ny tsy fahampian-tsakafo, hambara eto ambany.
Ny fanafody dia fanehoana ny fiheveran'ny vatan'ny olona iray amin'ny zavatra iray na hafa. Matetika dia misy fiantraikany amin'ny tsy fahampian-tsakafo ny olona iray. Manafoana ny fanehoan-kevitra, izay afaka maneho ny tenany sy ny fitepoka, ary ny urticaria, ary ny orona mihetsiketsika, miaraka amin'ny tsy fahampian'ny zava-manan'aina, amin'ny fanaovana antihistamines. Mazava ho azy, tsy azonao atao ny mamantatra ny tenanao amin'ny toe-javatra rehetra, ary raha sendra mampiahiahy ianao, dia tokony hitodika any amin'ny manam-pahaizana manokana aloha. Ankoatra ny zava-mahadomelina, izay hanampy haingana sy mahomby amin'ny fiatrehana ny olana, tokony dokotera amin'ny dokotera ny fanafody antihistamine manerantany, izay hameno ny kitapo voalohany amin'ny hoavy.
Ankehitriny, misy taranaka efatra lehibe indrindra amin'ny antihistamines izay miaro amin'ny alikaomia. Izy rehetra dia manakana ny fanehoan-kevitra tsy mahazatra izay mahatonga ireo mpandray ny tantaramin'ny histamine:
Ny taranaka voalohany - sedatives (manana fiantraikany ratsy eo amin'ny vatana).
Ny taranaka faharoa dia tsy sedentary.
Ny taranaka fahatelo dia metabolites. Mahomby ny zava-mahadomelina, tsy misy fiantraikany ratsy.
Misy ihany koa ny taranaka faha efatra farany amin'ny antihistamines. Ny votoatin'ity taranaka ity dia tsy misy vokany eo no eo, fa miasa ao amin'ny vatana mandritra ny fotoana maharitra.
Takelaka antihistamine avy amin'ny tsy fahampian-tsakafo
Ny latabatra antihistamine ankehitriny dia heverina fa ny zava-mahadomelina malaza indrindra amin'ny alikaola. Ireo fanafody ireo dia ampiasaina rehefa ilaina ny manala haingana ny fisehoan-javatra mampihetsi-po (fihenjanana avy amin'ny bibikely bibikely, fako eo an-toerana, fanehoan-kevitra amin'ny fluff na volon'ondry).
Misy vondrona lehibe telo misy tabilao misy alikaola:
Antihistamines mivantana tsy misy alikaola.
Aretina mahasoa amin'ny sela tompon'andraikitra amin'ny fisehoan-javatra mampihetsi-po.
Hormonina misy fiantraikany eo amin'ny vatana.
Antihistamines mahomby sy amin'ny alèin'ny sakafo. Marina izany, tokony ampiasaina amin'ny toeran-kafa izy ireo. tena ny fitsaboana ny alèin'ny sakafo - ny sakafo voalanjalanja tsara sy ny fanilihana sakafo izay mety hiteraka fihetseham-po. Fantaro ny vokatra azo avy amin'ny alèa dia azo atao tsy miankina, amin'ny fandinihana ny sakafo. Raha miteraka fahasarotana izany, ilaina ny mandalo ny fanadinana ary mandalo ny fitsapana mety.
Ny maso Antihistamine dia miala amin'ny tsy fahampian-tsakafo
Ny fanafody malaza hafa ho an'ny tsy fahampian-tsakafo dia antihistamine. Ampiasain'ireo tranga ireo izy ireo rehefa misy fihetseham-po mahatsiravina eo amin'ny maso . Maneho ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny masony amin'ny fomba samihafa, manomboka amin'ny haingon-tsoavaly tsotra, mamarana ny làlan-doha amin'ny tendrontany na ny mainty.
Ny vokatra rehetra dia misy vokany haingana. Manampy izy ireo haingana dia haingana mba hialana amin'ny tsy fahampian-tsakafo sy ny fivoahana. Tahaka ny fanafody hafa rehetra, tokony hojeren'ny manam-pahaizana manokana ny fitsingerenan'ny antihistamine.
Acute pyelonephritis - soritr'aretina
Ny fanaintainana eo amin'ny hoditra
Kyphosis an'ny hazavana
Fikarakarana ny lohalika any an-trano
Leukopenia - antony
Tazo mahery tsy misy soritr'aretina
EK ny fo
Arovana amin'ny aretina vokatry ny areti-maso - karazana sy fomba fiarovana amin'ny aretina
Okroshka amin'ny serum
Baraingo ambaratonga ho an'ny zazavavy
Firy no miaina velona?
Mahandro mandarinina - sakafo mahasalama amin'ny zava-pisotro mahasalama ilaina
Rosia maniry - mitombo avy amin'ny voa rehefa mamboly voa amin'ny zana-ketsa, fitomboan'ny fitsipika
Angelina Jolie dia nanao seminera ho an'ny mpianatra ao amin'ny Sekolin'i Londres momba ny Toekarena
Modely tsotra miaraka amin'ny fanjaitra mitongilana
Chili - loza sy tombontsoa
Fanosehana avy amin'ny vava
Miantsoa fiara any Mallorca
Ny fahalemena amin'ny sandry sy ny tongotra miaraka amin'ny fitaintainana - ny antony
Justin Theroux sy Jennifer Aniston nankalaza ny fampakaram-bady
Ny tsiambaratelo tsy misy laktose dia tsara sy ratsy